1. Gbasara Aṅuri
1.1 K’anyi malite n’isi isi mbido
Ọ n’enye aka mgbe ọbụla ị chọrọ ichọpụta ihe, ka i bido na imata ihe i bụ n’uche ị chọrọ ime na ndụ gi.
Onye ọbụla n’ime anyi tata n’ebi ndụ ngwa ngwa. Onweghi onye na-anaghachi azu le anya na ndụ ya, chee echiche hazie ihe ọ̣ chọrọ ime.
Ya bụ gini bụ ebum n’uche gi ị chọrọ n’ndu gị?
I nwego ihe i ga eme mgbe nadighi anya na nke i ga eme mgbe di anya wee nweta ebum n’uche gi a ị chọrọ?
O nwego nke ọbụna i megoro?
Ka ọbụna ebum n’uche gi a ị chọrọ ime enwego mgbanwe na ime ahọ olemole garaga?
I nwere ike iji edemede a wee leba anya n’ime ndụ gi wee jụọ onwe gi ajụjụ ebe ọ na eje.
K’anyi gba mbọ kọwa ihe izizi kpatara e ji kee onye ọbụla di ndụ. I legharia anya,i ga achọpụta na anyi nile di iche iche, anyi sina ọtụtụ ezi n’ụlọ, anyi nwekwara omume di iche iche mana e nwere otu ihe onye ọbụla n’ime anyi ji di ka ibe ya.
Otu ihe jikọrọ mmadu nile ọnụ n’agbanyeghi okwukwe ha mọbụ ihe onye bụ: nwoke ka ọbụ nwanyi, ogbenye ka ọbụ ọgaranya, bụ agụụ i nwe aṅuri. Agụụ a abụghị sọsọ nani maka ndi mmadu kama ọ bụkwazi maka ihe nile e kere eke di ndụ, bido na obele nda ruo na nnukwu enyi n’achọ aṅuri. N’imatụ, k’anyi were nda. Ọ ga- alipụta sina ebe ọ n’enwe mgbakasi ahụ gbaga n’ebe ọ ga enwe aṅuri. Ọbụrụ na ọ bia nso na ọkụ ọ ga efepu, mana ọ ga- aga ngwangwa gakwuru ebe a wụsara obele ọtọbụrịbụrị.
Ọ bụrụ na anyi chee echiche maka ya, ọ bụ na anyi nile anaghị agba mbọ ka anyi nọgide na ọnọdụ na atọ anyi ụtọ? ọ bụrụ na anyi anaghi agbasi mbọ ike ka anyi nwe aṅuri, opekata mpe anyi na agba mbọ ka anyi wepu ọnọdụ nadịghị anyi ụtọ. N’imatụ, anyi na-eme ngwangwa dosie ihe onyonyo ma ọbụrụ na ọ naghị alụ ọlụ nke ọma maka na anyi achọghị ka anyi ghara i nweta aṅuri site na ilele onyonyo nadị anyi mma